[Ukara] Wondershare PowerSuite Golden 2012: gị PC Companion
Buut elu gị PC, ebuli Windows arụmọrụ ọ bịa ọsọ ọsọ, kpuchido nzuzo gị, na na.
elekọta ihe niile kasị mma na azụmahịa
- Ònye ion
Kpam kpam na-akụda mmụọ Windows 7 \_ "enweghị ike ịrụzi \_" ozi-edozi ozugbo. Ndị kasị mma niile na-gburugburu ngwọta maka naghachi, disk management, backups. A ga-nwere maka gị Windows Toolkit.
M na-eche na kọmputa m bụ slowest na otu na mgbe shuts ala na onwe ya. M couldn \_ 't n'ezie chepụta ihe \_' s aga na otú idozi ya. Ezi ihe Powersuite Golden mere ọrụ maka m. Ọ ofu kọmputa m na kpam kpam-azọpụta m site adịkwa uche m na nke a na kọmputa. ekele!
M nwere ọtụtụ nsogbu na kọmputa m. E wezụga na otú ngwa ngwa, ọ na-emekarị mkpọka karịsịa mgbe m \_ 'M na n'etiti-arụ ọrụ na m oru ngo. Couldn \_ 't ime ihe ọ bụla banyere ruo mgbe m na-agbalị PowerSuite Golden 2012! M couldn \_ 't kwere na mbụ na nke a na kọmputa ka ga arụ ọrụ kwesịrị ekwesị ma ọ mere na ọ \_' s n'ihi na a oké software!
M bụghị na eji savvy. M na-eji kọmputa m ịga nanị online, ike ụfọdụ akwụkwọ na mgbe ụfọdụ egwu Ụfọdụ egwuregwu na nwanne m nwoke arụnyere. M download ụfọdụ faịlụ site na internet m na-eche ụfọdụ n'ime ndị faịlụ nwere ike ẹdude nje. My kọmputa bụ otú onye na-adịghị ma-ekele gị PowerSuite n'ihi na m na kọmputa na-arụ ọrụ n'ezie oké ugbu a. M Don \_ 't maara ihe m \_' d-eme na kọmputa m na-enweghị ya!
M nnọọ nkụda mmụọ na-eji kọmputa m na m nwere ike \_ 't ọbụna na-arụ ọrụ na ya ruo ogologo oge na-enweghị izute nsogbu na njehie. Ọ jiri ọtụtụ ugboro mgbe ọ na-arụ ọrụ ya \_ 's otú ngwa ngwa. M didn \_ 't mara ihe na-eme ruo mgbe m na-agbalị PowerSuite Golden 2012. Dị nnọọ gbalịrị ya nke ọchịchọ ịmata na mbụ ịhụ ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ n'ezie na maa ihe ọ n'ezie na-arụ ọrụ! M nwere ike mgbe kelee unu maka ihe nke a software mere na kọmputa m. Na-arụ ọrụ ugbu a na ọbụna ngwa ngwa! Daalụ nke ukwuu!
Daalụ nke ukwuu. Mbụ ngwọta bụ kpọmkwem ka mgbọrọgwụ nke ọdachi. Mfe otú! Dị nnọọ decompress disk na ihe niile na-arụ ọrụ ọzọ!
Abụghị m techy na niile, otú ahụ ka m ga-esi nnọọ nkụda mmụọ mgbe m nwere kọmputa nsogbu. M mechara hụ PowerSuite Golden 2012, na m nnọọ ụtọ ka m mere! Kemgbe m malitere iji ya, m na kọmputa-agba ọsọ n'ụzọ zuru okè. Daalụ Wondershare!
- Rut Martin
M na-enwe ọtụtụ nsogbu na kọmputa m. Abụghị m techy na niile, otú ahụ ka m enweghị echiche otú ndozi ihe ọ bụla. Akw m kpebiri na m na-agbalị Ike Suite Golden 2012. Ọ oke itunanya ofu ihe niile, ma ugbu a, kọmputa m na-arụ ọrụ mma karịa mgbe tupu! Daalụ Wondershare!
N'anya PowerSuite Golden 2012 dị ka ọ na nyeere m aka n'ezie adị n'elu kọmputa m na ọcha ya. Anaghịzi m enwe nchegbu banyere \_ "nzọụkwụ \_" na-ahụwo site m ụmụaka otú ha maara ihe m na-eme online (anyị niile òkè onye na kọmputa) otú a bụ ihe ịtụnanya.
Ngwa ngwa PC? Jiri ọzọ? Ebe a bụ ihe ngwọta zuru ezu!
Wondershare PowerSuite Golden 2012, Kasịnụ Nchikota WinSuite 2012 na LiveBoot 2012, na-enye gị a zuru ezu Windows ngwọta ka onwe gị site na a ngwa ngwa na kọmputa, nwa /-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo, kọmputa mkpọka, usoro njehie, data / paswọọdụ ọnwụ, wdg Iji gbochie n'ọdịnihu mkpọka, wdg , igosi a 360 Celsius PC ike ego dị ka kwa ụbọchị mmezi maka kọmputa gị, ihichapu gị "nzọụkwụ" na Windows ma ọ bụ online iji chebe gị nzuzo, na-azụ gị Windows & Office ngwaahịa igodo maka re-echichi, jikwaa gị disk iji nwee nke ya, mmepụta oyiri gị usoro maka nkwado ndabere na mpaghara, na ndị ọzọ. Ọ dịghị hassles! (Cheta: The ugbu a version bụghị Ofụri Esịt dakọtara na windows 8. Ọ naanị ike buut elu kọmputa gị, mmepụta oyiri ike mbanye, ndabere & Weghachi File na System, nkebi, Format Draịvụ na bootable mode.)
Main Akụkụ nke PowerSuite Golden 2012
Bootable CD / USB - buut elu ọ bụla jiri kọmputa na bootable CD / USB. Nnapụta Windows & ike mbanye - nnapụta jiri Windows ma ọ bụ ike mbanye ngwa ngwa ma effortlessly.
Computer Clean & Tuneup - Ebuli & speedup gị PC na 1 click na 360 Celsius kọmputa ahụ ike ego arụmọrụ
Data Recovery - Naghachi nza nke furu efu, ehichapụ, formatted ma ọ bụ rụrụ arụ faịlụ site na iche iche iche iche nke ngwaọrụ, gụnyere kọmputa, USB flash mbanye, na ekwentị mkpanaaka, igwefoto dijitalụ, mpụga ike mbanye, kaadị ebe nchekwa, iPod na ndị ọzọ na nchekwa media.
Paswọọdụ & Key Finder / Tọgharia - Get azụ okwuntughe gị Yahoo, Outlook, Gmail, wdg mgbe ị na-echefu ha, nakwa dị ka gbapụta gị Office & Windows ngwaahịa igodo mgbe reinstalling ha. Ọzọkwa, tọgharịa nchịkwa ma ọ bụ onye ọrụ paswọọdụ.
Disk Manager - diski management ngwọta maka nkebi / disk cloning, nkebi / disk ehichapụkwa, nkebi management, na ndị ọzọ.
Nzuzo & Nche - Ihichapu "nzọụkwụ" na Windows na online, nakwa dị ka encrypt ma ọ bụ shred faịlụ ka kpuchido nzuzo gị ma hụ na data nche.
Buut elu ọ bụla na kọmputa na a Bootable CD / USB
Buut elu ọ bụla desktọọpụ ma ọ bụ na laptọọpụ mgbe ị pụghị ịbanye Windows, gị na kọmputa mkpọka, ma ọ bụ nnọọ na ị chọrọ na-arụ ọrụ n'okpuru nchebe buut gburugburu ebe obibi.
Buut elu gị na kọmputa site inserting buut CD gị CD mbanye, ma ọ bụ inserting bootable USB, na mgbe ahụ Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa.
Atụmatụ ndị ọhụrụ WinPE 3.0 technology, na-ekwe nkwa 100% ngwaike ndakọrịta.
N'ike n'ike Ịnapụta ọ bụla jiri kọmputa ma ọ bụ Draịvụ
Buut elu kọmputa ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-oria virus.
Fast usoro mgbake si mkpọka dị ka bluescreen ma ọ bụ blackscreen.
Idozi booting nsogbu, random mkpọka na-efu faịlụ okuku dị ka 'ntldr na-efu', 'bootmgr na-efu', wdg
Idozi nkebi table, imebi ndekọ, ndekọ isi uru, jiri MBR ọbụna oria virus.
1 pịa naghachi usoro faịlụ dị ka buut oru mgbake.
Nnapụta Windows 7 / Vista / XP / 2003/2000 / NT / Home / ME / 98.
Ego, ọsọ elu & ebuli gị Computer
1-pịa PC Health Tulee: Nye ọkachamara aro banyere njikarịcha gị usoro ịrụ ọrụ dị ka N'ihi nke 360 Celsius scanning na PC gị.
Windows Speedup: Speedup gị PC site optimizing Windows mmalite ngwa, Windows ọrụ ngwa na Internet ihe.
Windows nzacha na mkpocha: Ihichapu nzọụkwụ na kọmputa gị na online iji chebe gị nzuzo; wepụ ejibeghi nkwụnye-ins, iwepụ isi ike omume na ọcha junk faịlụ na-eme ka gị na kọmputa ngwa ngwa; iṅomi ma ọcha na-abaghị uru ndekọ na kọmputa gị.
Weghachi All Lost Data na ala
Naghachi fọrọ nke nta niile dị iche iche nke Files: naghachi photos, videos, akwụkwọ, ọdịyo faịlụ, Archives na ozi ịntanetị mfe; Ịnwere ike ihuchalu photos, ụfọdụ vidiyo na ọdịyo faịlụ, akwụkwọ na ozi ịntanetị tupu mgbake.
Akwado Dị Iche Iche Data Loss ọnọdụ: Naghachi data furu efu ruru "Mgbanwe + Hichapụ" nhichapụ ma ọ bụ egweri biini ihicha, nakwa dị ka nkebi ure ma ọ bụ formatting.
Ofụri Esịt dakọtara na iche iche ngwaọrụ: gbapụta faịlụ furu efu site na kọmputa, USB flash mbanye, na ekwentị mkpanaaka, igwefoto dijitalụ, mpụga ike mbanye, kaadị ebe nchekwa, MP3 / MP4 ọkpụkpọ, iPod na ndị ọzọ na nchekwa media.
Mmepụta oyiri gị dum Draịvụ na partitions
Ọ bụla siri ike mbanye cloned na PowerSuite Golden 2012 ga-bootable.
Nkwado niile Windows nsụgharị, ide, SATA, SCSI, USB, FireWire, na ndị ọzọ.
Nkebi, Format na ọcha gị disk
Nye zuru okè nkebi management - ike, ihichapụ, resize, format, zoo, wdg
Mgbanwe iji na-mmepụta oyiri a nkebi ma ọ bụ dum ike mbanye na esịtidem ma ọ bụ mpụga disk.
Naghachi gị MBR (Master buut Record), wughachi furu efu nkebi table, na n'elu Doppler ka ego maka ọjọọ ndi.
Miri ọcha gị dum ike mbanye ma ọ bụ nkebi na 1-click.
Get Back Okwuntughe & eme
Paswọọdụ Finder: gbapụta okwuntughe gị Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, MSN, Windows Live, ntụgharị AutoComplete, Windows akpaaka logon, ọsịsọ-elu na ndị ọzọ.
Windows Key Finder: weghachite igodo na NJ gị Windows ngwaahịa.
Office Key Finder: Weghachi registration igodo maka Office 2010, 2007, 2003, XP na 2000.
Paswọọdụ Tọgharia: Tọgharia nchịkwa ma ọ bụ onye ọrụ paswọọdụ mgbe ị na-echefu ha.
High Nche nke Nzuzo & Dị Oké Mkpa Data Nchedo
Personal Nchekwa: Ị nwere ike ịmepụta a "onye mma" nchekwa na kọmputa gị nke bụ naanị n'ihi na ị na-echekwa na ohere onye stof.
Nzuzo Cleaner: Hichapụ niile nzọụkwụ nke nchọgharị gị, gị usoro ọrụ ndia, online Internet tracks, na-amalite menu, nakwa dị ka na-adịbeghị anya akwụkwọ na ndia, wdg
Njikwa Shredder & izo ya ezo: encrypt na shred gị onwe faịlụ zere n'enweghị ikike ịnweta ma ọ bụ mgbake.
<="" dd=""> Nwere a ọhụrụ mmalite mgbe ị chọrọ reinstall Windows.
Adị n'elu draịvụ ike gị mgbe ị chọrọ ọcha agadi ike mbanye.
Gbochie gị data na faịlụ si na-natara site ọ bụla data mgbake software mgbe ị na nyere ma ọ bụ na-ere na kọmputa gị.
Multi-ọtọ na zuru okirikiri ọrụ enyemaka ị dozie nta ka ọ bụla PC nsogbu. Ọ bụ ike na a pụrụ ịdabere iji.
Otu afọ FREE oru nkwado. Anyị ga-aza ajụjụ n'ime 1 ~ 2 awa. Dị 24 awa ụbọchị, 7 ụbọchị n'izu.